Aminawehelie.me – Page 4 – Radio & TV host, Author,Play-Writer
By aminawehelie on September 8, 2019 • ( Leave a comment )
09/09/2019 (AminaWehelie.me) Witten By: Mr Omar Dini Kenyan peacekeepers in Somalia came here as part of African Union Mission in Somalia and they were expected to provide protection to Somalia political and peace building processes and help war against terrorists ravaged the region. Unfortunately these peacekeepers who have […]
By aminawehelie on August 22, 2019 • ( Leave a comment )
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho u magacaabay Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish). Madaxweynaha ayaa faray Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka in uu sii dhammeystiro qorshayaashii horumarineed iyo waxqabadkii muuqday ee Guddoomiyihii hore, Alle ha u naxariistee, Shahiid Cabdiraxmaan Cumar […]
By aminawehelie on May 29, 2019 • ( Leave a comment )
29th of May, 2019, (Mogadishu)-The Benadir Regional Court dismiss today criminal charges against journalist Ali Adan Mumin of Goobjoog Media Group and ordered journalist to be released tomorrow after the ongoing national examination ends The journalist who was arrested on Tuesday morning was alleged causing confusion around the […]
29th May, 2019 (Muqdisho, Somalia)-Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta waxba kama jiraan ka dhigtay, dacwad dambiyeed lagu soo oogay, Warbaahiye Cali Aadan Muumin oo ka tirsan warbaahinta Goobjoog, waxeyna maxkamadu go’aamisay in berrito xabsiga laga sii daayo. Warbaahiyahan ayaa la xiray subaxnimadii Talaadada waxaana lagu eedeeyey in uu […]
Ardaaga Amina waxaa marti ku ah Faaduma Nuur Amiin (Faaduma Buulo Burte) waxeyna iyada iyo Aamina ka sheekeysteen, farqiga u dhaxeeya noloshii ay ku soo koreen, iyo tan hadda jirta, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo ku nool wadanka iyo dibadaba. Courtesy of the video: Kalsan TV & Amina […]
By aminawehelie on May 24, 2019 • ( 1 Comment )
24th May, 2019 -(Paris) Qarax gaystay dhawacyo halis ah ayaa ka dhacay bartamaha magalada Lyon, ee dalka Faransiiska. sida ay cadeeyeen ciidanka Police Fransiiska, Qaraxaas oo dhacay abarihii 5-ii Iyo barkii galabnimo ee maanta (17H30) waqtiga Fransiiska, Ilaa iyo hada 13 qof ayaa la soo sheegay dhawac soo […]
By aminawehelie on May 20, 2019 • ( Leave a comment )
Eiffel Tower oo ah taalada dheer ee ku taala magaalada Paris ee dalka faransiiska ayaa gebi ahaanba shaqadeedii hakad la geliyey ka dib markii nin oo dusha sare uga baxay. Taaladan oo ah goob loo dalxiis tago dhirirkeeduna yahay 1000 Dhudhun (1000 Ft), ayaa mar qura lagu baraarugay, […]
Cinwaanka kor ku xusan ma cusba, oo hore ayaan u qoray maqaal uu hordhac u yahay, wuxuuna ku soo baxay maqaalkaasi wargeyskii QARAN PRESS oo Muqdisho lagu daabici jiray waayadii dagaallada sokeeye ay halakeeyeen magalaada iyo dadkeedaba,kaasoo ay ku loolamayeen hogaamiye kooxeedyo kursiga u hamuun qaba. Xilligaas waxaan […]
By aminawehelie on May 12, 2019 • ( Leave a comment )
Axad, 12th May, 2019 KABUL (Radio FreeEurope)- Saraakiil reer Afghan ah ayaa sheegaya in Mena Mangal, oo hore u ahayd wariye Taleefishan, lagu toogtay caasimada Afghanistan ee Kabul. Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha gudaha, Nasrat Raimi ayaa sheegay in Mena lagu dilay degmada 8-aad ee Kabul, saacadihii hore […]
By aminawehelie on April 29, 2019 • ( Leave a comment )
Wadaadka si khaldan Diinta u fahmaa waxa uu ka dhigan yahay dhakhtar daawo aan sax ahayn qof u qoray. Saban aynu soo dhaafnay ayaa waxaa laga sheekeeyaa in ay wada safreen laba wadaad oo saxiib ahaa . Wadaadadii oo sheekadu isugu baxayso ayaa waxaa qabsaday Roob xoogleh kadib […]